Ezona nkqubo zintengiso zoRhwebo ngoJanuwari 2022-Yeyiphi iApp yoRhwebo eYona ilunge kakhulu kuwe?
Ezona nkonzo ziPhambili zokuRhweba nge2021-Yeyiphi iNkqubo yoRhwebo eKona ifanelekileyo kuwe?
Indawo yotyalo-mali ekwi-intanethi ikhule yaya kwiindawo eziphakamileyo ezibonakalayo kwiminyaka yakutshanje. Kuqala, senze utshintsho ukusuka kumrhwebi osekwe kwifowuni ukuya kwiqonga lokuthengisa elikwi-Intanethi ekuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi kwinduduzo yekhaya lakho. Kwaye ngoku? Ii -apps zokurhweba ngefowuni.
Ngokusebenzisa umrhwebi okwi-intanethi onika usetyenziso olusebenzayo lokurhweba ngeselula, unokufikelela kumawaka ezixhobo zemali ngokucofa iqhosha. Nokuba zizitokhwe kunye nezabelo, i-forex, izinto zorhwebo, ii-indices, okanye ii-cryptocurrensets- ukurhweba ekuhambeni akuzange kube lula.
Ngale nto ithethwayo, kukho amakhulu eeapps zokurhweba ezisebenzayo kwintengiso, ke ukwazi ukuba yeyiphi iarhente oza kuhamba nayo ayikho i-feat elula. Kananjalo, singacebisa ukuba sifunde isikhokelo sethu esinzulu kwi IiNkqubo zoRhwebo eziPhambili ze2021.
Qaphela: Ukuba ujonge ukubandakanya uhlalutyo lobuchwephesha obuphezulu, kungangcono wenze oku kwiqonga lokuthengisa ledesktop ngokuchasene nescreen esincinci.
Zithini iiNkqubo zoRhwebo?
Ngamafutshane, ii -apps zokurhweba zikuvumela ukuba urhwebe ngesixhobo esiphathwayo. Kananjalo, uninzi lweempawu ezikhoyo kwindawo efanelekileyo yokuthengisa indawo yedesktop ziya kufikeleleka kwi-app yakho yorhwebo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ii -apps zokurhweba azizimele zodwa kumaqonga otyalo mali. Ngale nto, sithetha ukuba iapp iyakuba yinxalenye yenkonzo ebanzi yokurhweba.
Umzekelo, uya kube usasebenzisa umthengisi we-Intanethi ngokwesiko, nangona kunjalo, umrhwebi uya kubonelela ngenkqubo yokuthengisa esebenzayo ecaleni kweqonga ledesktop. Oku kukunika okona kulungileyo kwihlabathi liphela. Ngelixa uyakuhlala unokhetho lokurhweba xa ushukuma, ukuba ufuna ukwenza uhlalutyo lobuchwephesha olunzulu, ungakwenza oku kwiscreen esikhulu ngakumbi kwindawo yedesktop.
Zithini iinzuzo kunye neengozi zokusebenzisa i-MT4 Broker?
Urhwebo ekuhambeni 24/7
Ungaze uphoswe lithuba lokuthengisa
Kwangoko phuma kurhwebo xa iimarike zithengisa
Ilungiselelwe ngokupheleleyo ubungakanani bescreen esincinci
Inika zonke izinto ezifanayo njengoko zifunyenwe kwindawo ephambili yedesktop
Idiphozithi kwaye urhoxise imali ngonqakrazo lweqhosha
Kunzima ukwenza uhlalutyo lobugcisa olunzulu kwiscreen esincinci
Iyahambelana kuphela nezixhobo ze-Android kunye ne-iOS
Zisebenza njani iiNkqubo zoRhwebo?
Ukuba awukaze usebenzise usetyenziso lokuthengisa ngaphambili, kuya kufuneka wazi ukuba le nkqubo ubukhulu becala iyafana nomgangatho yorhwebo ntengiso iqonga. Ngale nto ithethwayo, apha ngezantsi sidwelise ezona nyathelo ziphambili oya kuthi uzilandele ukuze ufumane umsebenzi wokurhweba ngefowuni kunyawo lwasekunene.
Inyathelo 1: Khetha iNkqubo yokuThengisa ngeSelfowuni
Okokuqala nokuphambili, kuya kufuneka ukhethe umrhwebi okwi-intanethi ohlangabezana neemfuno zakho. Ubuncinci, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi unikezela usetyenziso lokurhweba oluhambelana nefowuni yakho. Kwiimeko ezininzi, oku kuya kubandakanya zombini iimodeli zokusebenza ze-Android kunye ne-iOS.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge izinto ngaphandle kwe nje usetyenziso lweselfowuni. Oku kuya kubandakanya iimetrikhi ezinje ngommiselo, iifizi zokurhweba, ukusasazeka, iintlawulo kunye nenkonzo yabathengi.
Qaphela: Sinikeze icandelo elinzulu malunga nendlela yokukhetha i-app yokurhweba ephathekayo ngokuya ngaphantsi kwisikhokelo sethu. Sikwadwelise ezona zikhetho zethu ziphezulu zi-5 ukuya esiphelweni sephepha ukuba awunaxesha lokwenza uphando lwakho!
Inyathelo 2: Khuphela uze ufake iApp
Nje ukuba ukhethe umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho zokurhweba, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso kwifowuni yakho. Ungayifumana usetyenziso ngewebhusayithi ephambili yedesktop yomthengisi ekubhekiswa kuye, okanye ngokukhangela ngeGoogle Play okanye iTunes Store.
Nangona kunjalo. Singacebisa ukwenza eyangaphambili, njengoko ufuna ukuqinisekisa ukuba ukhuphela usetyenziso olusemthethweni, ngokuchasene nokuxelisa. Nje ukuba ukhuphelo lugqityiwe, faka usetyenziso kwaye uqalise inkqubo yokuvula iakhawunti.
Ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye neqonga lakho olikhethileyo lokurhweba kwi-Intanethi. Oku kuqala kuya kufuna ukuba ufake ulwazi oluthile lomntu ukuze umrhwebi azi ukuba ungubani.
Inombolo ye-Inshurensi yeSizwe okanye inombolo yesazisi yeRhafu
Kuya kufuneka unikezele ngolwazi malunga nenqanaba lengqesho. Oku kuyakubandakanya ibhendi yakho yomvuzo yonyaka, kunye nohlobo lweshishini osebenza kulo. Kuya kufuneka wazise umrhwebi ukuba athini amava akho okurhweba ngaphambili-njengoluhlobo lwempahla owawukhe wayithengisa ngaphambili, kunye nomndilili ubungakanani bemisebenzi yakho.
Inyathelo 4: Qinisekisa isazisi sakho
Eyaziwa ngokuba yi-KYC (Yazi uMthengi wakho), bonke abarhwebi base-UK kufuneka baqinisekise ubungqina bakho ngaphambi kokuba bakuvumele ukuba usebenzise iinkonzo zabo. Le yinkqubo engenamthungo - ngakumbi ukuba uyayenza ngenkqubo yokurhweba ephathekayo. Konke okufuneka ukwenze kukuthatha ifoto ye-ID yakho ekhutshwe ngurhulumente (ipasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba) kwaye uyilayishe kwi-app.
Ezinye iinkonzo zokurhweba ziya kukucela ukuba uqinisekise idilesi yakho. Ukuba bayakwenza, kufuneka uthathe umfanekiso woxwebhu olusemthethweni oluqulathe igama lakho nedilesi- njengestetimenti sebhanki okanye into oyisebenzisayo.
Inyathelo 5: Iimali zeDeposithi
Kule nqanaba lenkqubo yenyathelo ngenyathelo, kuya kufuneka ngoku uneakhawunti esebenzayo yorhwebo eqinisekiswe ngokupheleleyo. Kananjalo, ngoku ungaqhubeka nokufaka imali. Kuxhomekeka kumrhwebi ekubhekiswa kuye, unokukwazi ukwenza oku nge-debit / ngecredit card. Ukuba kunjalo, kunokwenzeka ukuba uGoogle Pay okanye iApple Pay babe nakho ukukhawulezisa inkqubo yakho.
Ngenye indlela, unokucelwa ukuba ufake imali ngokudlulisela ebhankini. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze icace imali. Kwezinye iimeko, unokukwazi ukufaka imali nge-e-wallet njengePayPal okanye iSkrill, ehlala ikhawuleza.
Isinyathelo 6: Qala ukuThengisa
Nje ukuba idiphozithi yakho yenziwe, ukulungele ukubeka iodolo yakho yokuqala. Uninzi lwee -apps zokuthengisa zikuvumela ukuba ukhangele i-asethi okanye isixhobo semali onqwenela ukurhweba. Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba nge-GBP / i-USD, khangela nje isibini semali kwaye kuya kufuneka usiwe ngqo kwiphepha lokuthengisa.
Njengenqaku elisecaleni, kungangcono ukuba uqalise ngobungakanani obuncinci bezorhwebo de ube ukhululeke ngakumbi kukhetho lwakho lokuthengisa olukhethiweyo. Kungenxa yokuba uya kuthengisa kwiscreen esincinci kunokuba kunokwenzeka ukuba uqhelile.
Zeziphi iiasethi eziNikezelwa ziNkqubo yokuThengisa ngeSelfowuni?
Ii -apps zokurhweba ngefowuni zikuvumela ukuba uthengise iiasethi ezifanayo njengoko zifunyenwe kwiqonga ledesktop eliphambili lomthengisi. Umzekelo, ukuba usebenzisa ingcali yomthengisi we-forex edwelisa uluhlu lweepawundi ezingama-100, zonke ezi zibini ziya kufumaneka zorhwebo nge-mobile app.
Nangona kunjalo, apha ngezantsi sidwelise ezona ntlobo ziphambili zeasethi oza kuthi uzokwazi ukuzithenga uthengise ngazo kwintengiso yesoftware.
Uninzi lwee -apps zokurhweba ziya kudwelisa amawaka esitokhwe kunye nezabelo ezivela kwiimarike ezininzi. Ubuncinci, oku kuya kubandakanya ukutshintsha okukhulu kwesitokhwe njenge-NASDAQ, iNew York Stock Exchange, iLondon Stock Exchange, kunye neTokyo Stock Exchange.
Olunye lweeapps zokurhweba ezihamba phambili ziya kubamba notshintshiselwano lwesitokhwe kwiindawo zentengiso ezingaphantsi kolwelo. Oku kunokubandakanya ukutshintshiselana e-Australia, Canada, Singapore okanye eHong Kong.
Uninzi lwee -apps zokurhweba ziya kubonelela nangesebe elibanzi le-forex. Oku kuyakuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iimfumba zeepara zemali ezivela kwii-majors, ebantwaneni, nakwi-exotic.
Qiniseka nje ukuba ujonge ukusasazeka xa uthengisa i-forex nge-app yakho yeselfowuni- ngakumbi ngaphandle kweeyure eziqhelekileyo zentengiso.
Ukuba unomdla wokuqikelela kwindawo yezigidi ngezigidi zeepawundi zorhwebo, uninzi lweeapps zorhwebo ziya kubamba uninzi lweemarike. Kwisebe lamandla, oku kufuneka kubandakanya izinto ezahlukeneyo ioyile Iimarike, kunye negesi yendalo.
Unokufumana iimfumba zeemarike kwicandelo lezinyithi ezixabisekileyo- ezinje igolide, isilivere, kunye neplatinum.
Iimali ezithengiswa ngotshintshiselwano (ii-ETFs) zikuvumela ukuba uqikelele kwiasethi, okanye kwiqela leeasethi, ngaphandle kokuba ungumniniyo. I-ETF ilandelela nje ixabiso lehlabathi lokwenyani leasethi ekuthethwa ngayo, ekuvumela ukuba uhambe ixesha elide kwaye mfutshane.
Iimarike ze-ETF ezidumileyo ezifumaneka kwii -apps zokurhweba ezihambayo zibandakanya i-S & P 500, igolide, kunye neRussell 2000 Index.
Ukuba unomdla wokurhweba amasheya kunye nezabelo, kodwa awunawo amava afunekayo okuthenga nokuthengisa iinkampani ezizezinye, kutheni ungaqwalaseli ii-indices zemarike yestokhwe? Kulapho uqikelela khona kwiimarike ezibanzi zesitokhwe ngokutyala imali kumakhulu eenkampani.
Unokwenza oku ngentengiso enye, ke akukho sidingo sokuchitha iiyure-ubeka ii-odolo ezingamakhulu. Iimpawu zeemarike zentengiso ezidumileyo zibandakanya i-FTSE 100, NASDAQ 100, kunye noDow Jones.
Ii -apps zokurhweba ngoku zikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo lemali edumileyo efana neBitcoin. Uya kuhlala unokhetho lokurhweba ngababini be-crypto-to-fiat njenge-BTC / USD, okanye izibini ezinqamlezileyo ezinje nge-BTC / ETH.
Khawukhumbule nje, ukuba usebenzisa umthengisi wendabuko ukutyala imali kwi-cryptocurrensets, konke-kodwa-kuyaqinisekileyo ukuba uyakwenza oko ngeCFD. Oku kuthetha ukuba awuzukuba nayo i-asethi engaphantsi, endaweni yoko, ucinga nje ngexabiso lemali yedijithali yexesha elizayo.
Ndiyikhetha njani iApp yoRhwebo oluShukumayo?
Ukuba awusayi kufumana i-app yokurhweba ephathekayo ehlangabezana neemfuno zakho zotyalo-mali, iindaba ezimnandi kukuba unamakhulu wabarhwebi onokukhetha kubo. Nangona kunjalo, oku kwenza ukuba kube nzima ukwazi ukuba leliphi iqonga oza kuhamba nalo- hayi ubuncinci kuba akukho zixhobo zorhwebo zimbini ezifanayo.
Kananjalo, singacebisa ukuba ufunde ezi zinto zilandelayo ngaphambi kokukhuphela kunye nokufaka usetyenziso olutsha lokuthengisa.
Qaphela: Ukuba awunalo ixesha elifunekayo lokufunda kwezi metric zilandelayo kwaye wenze olwakho uphando, ungatsiba eli candelo uye ngqo kuluhlu lwethu lweeapps zokurhweba ezihambayo.
Okokuqala nokuphambili, kufuneka uqinisekise ukuba usetyenziso lokuthengisa olusebenzayo luyahambelana nesixhobo sakho. Kwiimeko ezininzi, abathengisi abakwi-Intanethi bayakuphuhlisa usetyenziso lokurhweba lwezixhobo zombini ze-Android kunye ne-iOS, nangona oku kungasoloko kunjalo.
Ekugqibeleni, ukuba usebenzisa isixhobo esiwela ngaphandle kwesibonisi se-Android / i-iOS, ngekhe ube nakho ukurhweba ngesicelo esiselfowuni.
Nje ukuba uvavanye ukuba usetyenziso luyangqinelana nesixhobo sakho. Kuya kufuneka uphinde uphonononge iziqinisekiso zomthengisi. Phambili koku kufuneka kube kukuma okulawulayo komthengisi. Ukuba iqonga lisekwe e-UK, kuyakufuneka ukuba ube nelayisensi nguGunyaziwe wokuziphatha kwezeMali (FCA).
Ukuba awuqinisekanga ukuba umthengisi unelayisensi ye-FCA, unokukhangela irejista yomlawuli kwi-Intanethi. Ukuba kubonakala ngathi umrhwebi uyarhweba ngaphandle kwemvume efunekayo yolawulo, thintela iqonga xa lilonke.
🥇 Iidiphozithi kunye nokuTsala imali
Kuya kufuneka ukuba uqwalasele ukuba iya kusebenza njani inkqubo yenkxaso-mali xa usenza idiphozithi ngefowuni yakho. Eyona ndlela ilula yokwenza oku iya kuba kukuGqogqa kuGoogle okanye iApple Pay. Kungenxa yokuba iinkcukacha zedebhithi / zekhadi letyala ziya kuhlala ngokuzenzekelayo, ngelixa kwangaxeshanye ukhusela ulwazi lwakho lwezezimali ukuba lungangeni kwizandla ezingalunganga.
Ngenye indlela, umrhwebi unokuxhasa i-e-wallet njengePayPal, okanye ugqithiso lwebhanki yemveli. Qinisekisa ukuvavanya ukuba ingaba i-app yokurhweba ihlawulisa nayiphi na imirhumo yokufaka imali, nokuba ngaba kukho naziphi na iibhalansi ezincinci ezifunekayo.
🥇 Iindidi zeeasethi
Ii -apps zokurhweba ngefowuni ziza kuluhlu lweemilo kunye nobukhulu. Ngelixa ezinye zigxile ngokukodwa kwi-forex, ezinye zijolise kwii-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin kunye Ethereum. Nokuba yeyiphi na indlela, kuya kufuneka uphonononge uhlobo lweeklasi zeeasethi ezibonelelwa ngumthengisi.
Ngaphaya koko, kuya kufuneka uvavanye ukuba lubanzi kangakanani uluhlu lwazo lwezixhobo zemali. Umzekelo, konke kulungile kwaye kulungile ukuba usetyenziso lweselfowuni luxhasa i-forex, kodwa unokushiywa uphoxekile ukuba uxhasa kuphela izibini eziphambili.
Fe Imali yokurhweba nokusasaza
Zonke ii -apps zokurhweba ngefowuni zikwishishini lokwenza inzuzo, ke kuya kufuneka ujonge indlela umrhwebi akubiza ngayo ukuba usebenzise iinkonzo zayo. Nokuba yeyiphi iklasi yeasethi ojolise kuyo kurhwebo, kuya kuhlala kukho ukusasazeka kolunye uhlobo. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa'.
Ukusasazeka kokukhulu, ukuxabisa kakhulu iasethi kukuthengisa. Kananjalo, ezonaapps zilungileyo zokuthengisa ziya kubonelela ngokusasazeka okuqinileyo. Ngokufanayo, qiniseka ukuba uyaluqonda ubume beekhomishini zomthengisi. Ngelixa abanye abathengisi behambisa ukuthengisa ngaphandle kwentlawulo, abanye baya kukuhlawulisa umrhumo oguqukayo ngokusekwe kubungakanani borhwebo lwakho.
Ngelixa usetyenziso lweselfowuni lunokuma ngokubonelela ngamawaka easethi kwiindawo ezinamatye asezantsi, kuya kufuneka uphinde uphonononge indlela esisebenza ngayo isicelo. Emva kwayo yonke loo nto, uyakube urhweba ngosayizi wesikrini omncinci kakhulu kunesixhobo esisezantsi sedesktop, ke kubalulekile ukuba usetyenziso lubonelele ngamava okurhweba ngaphandle komthungo.
Ayisiyi kuba kuphela oku kubandakanya eyona ndawo iphambili yorhwebo uqobo, kodwa kunye nokukwazi ukuhamba ukusuka kwi-asethi ukuya kwi-asethi, kunye nokuqalisa iidipozithi kunye notsalo.
Kunokubakho ixesha apho ufuna uncedo ngexesha lokwenyani. Ukuba ujonge ukusebenzisa i-broker oyikhethileyo ngokuyintloko kwifowuni ephathekayo, ke qiniseka ukuba uyakwazi ukunxibelelana nenkxaso kusetyenziswa usetyenziso lokuthengisa. Oku kufuneka kufike kwifom yengxoxo ephilayo okanye i-imeyile.
Iinkqubo ezi-5 eziPhambili zokuRhweba ngo-2021
Ngelixa singacebisa ukuba sisebenzise eli candelo lingentla ukuphanda umrhwebi omkhethileyo ngokuzimeleyo, apha ngezantsi sidwelise ii-5 zokukhetha ii-app ezikhethiweyo ze-2021. Isindululo ngasinye sijolise kwindawo ethile yokurhweba kwi-Intanethi- njengeyona app ilungileyo yabaqalayo, amasheya, forex, kunye neBitcoin.
Ukuba usifundile isikhokelo sethu kwezona zixhobo zibalaseleyo zokurhweba ze2021 ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, kuya kufuneka ngoku ube nezixhobo ezifunekayo zokufumana umthengisi ohlangabezana neemfuno zakho. Njengoko sixoxile kwisikhokelo sethu sonke, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iqonga liyadlula kwiindawo ezininzi-ezinje ngommiselo, iifizi, ukusasazeka, izixhobo ezinokuthengiswa kunye nenkxaso yabathengi.
Ngale nto ithethwayo, sikwadwelise iingcebiso zethu zokurhweba ezi-5 eziphezulu kwabo bangenalo ixesha lokufumana iqonga ngokuzimeleyo. Oku kubandakanya usetyenziso lokurhweba lwabatyali zimali abatsha, kunye neyona app ilungileyo yokuthengisa i-forex, isitokhwe kunye neBitcoin.
Iqela kwi-AVATrade ngoku libonelela nge-20% yebhonasi ye-forex efikelela kwi- $ 10,000. Oku kuthetha ukuba uyakufuna ukufaka i-50,000 yeedola ukuze ufumane elona xabiso liphezulu lebhonasi.
Qaphela, kuyakufuneka ubeke ubuncinci be- $ 100 ukufumana ibhonasi, kwaye iakhawunti yakho kufuneka iqinisekiswe ngaphambi kokuba imali ifakwe. Ngokurhoxisa ibhonasi ngaphandle, uyakufumana i-1 yedola kuyo yonke i-0.1 lot oyithengisayo.
2 Capital.com - IiKhomishini zeZero kunye nokusasazeka kwe-Ultra-Low
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezinikezelwa ngurhwebo olusebenzayo?
Oku kuyokwahluka kwi-app-to-app. Ukuba umthengisi ekuthethwa ngaye wamkela amakhadi etyala / okuthenga ngetyala, kuya kufuneka ukwazi ukufaka ngeGoogle Pay okanye ngeApple Pay. Ngenye indlela, unokukwazi ukufaka idiphozithi ebhankini okanye i-e-wallet.
Zingaphi izixhobo ezinokuthengiswa zorhwebo?
Oku kuya kuxhomekeka ekubeni uhlala phi, uhlobo lwe-asethi onqwenela ukuyithengisa, nokuba ngaba uyathengisa okanye ungumrhwebi oqeqeshiweyo. Ekugqibeleni, ukuba ungumthengi othengisa e-UK, uya kubanjwa yimida ebekwe yi-EMSA.
Ngaba ii -apps zokurhweba ngeselula zinemfuno eseleyo yokulingana kweakhawunti?
Uninzi lwenza njalo. Oku kuhlala kulibhalansi esezantsi ye- $ 100, nangona inokuba phezulu kakhulu.
Ngaba zikhona naziphi na iiapps ezilungileyo zokurhweba ngeefowuni zeWindows?
Njengokuba kunjalo uninzi lweeapps zeselfowuni kule mihla yanamhlanje, ii-brokers zihlala zisebenzisa ii -apps zezixhobo ze-Android kunye ne-iOS kuphela.
Ngawaphi amajelo enkxaso kubathengi anikezela ngeapps zokurhweba?
Abanye abathengisi bayakuvumela ukuba uthethe nearhente yenkxaso yabathengi ngokusebenzisa ingxoxo ephilayo kwi-app yakho yorhwebo. Ngenye indlela, kuyakufuneka uthumele i-imeyile okanye utsalele iziko lenkxaso ngokuthe ngqo.
Ndilufumana njani usetyenziso olushukumayo lomrhwebi endimnyulileyo?
Singacebisa ukuba ukhuphele usetyenziso lweselula ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yedesktop yomthengisi wakho. Ngale ndlela, unokuqiniseka nge-100% ukuba ukhuphela usetyenziso olusemthethweni.
Ngaba ii -apps zokurhweba ngeselula zibonelela ngeebhonasi?
Ukuba umrhwebi ekuthethwa ngaye unikezela ngebhonasi kwiqonga ledesktop yalo, kusenokwenzeka ukuba ibhonasi iya kubakho nakwabo basebenzisa usetyenziso lokuthengisa.